Casebook 1899: zita rine chitarisiko chekare uye zvakawanda zvakavanzika | Linux Addicts
Isaac | 21/05/2022 07:14 | Linux Mitambo, chiutsi
Casebook 1899 - Iyo Leipzig Adventure chiitiko chine graphic zvinokunyudza munguva yakapfuura uye zvinouya zvakatakurwa nezvakavanzika kuti zvigadziriswe. Iko zvino yave kutsvaga mari yekuiburitsa paLinux, padivi peWindows uye macOS kuburitswa. Basa iro vashandisi veLinux vaizofarira pasina mubvunzo kubva kuHomo Narrans Studio. Asi kuti zviitike, usakanganwa kutora chikamu munekickstarter campaigns ye crowdfunding. Chirongwa ichi chakaparurwa neHomo Narrans Studio kuyedza kuwana mari yavanoda.
Parizvino, kungotangwa kweWindows neMac chete ndiko kuri kufungidzirwa. Kune masters, Casebook 1899 ichasvika. Chivabvu 31, mumavhiki mashomanana chete. Nehurombo pakutangwa kweLinux isu tichafanirwa kumirira zvishoma.
Zvidzidzo zvacho pachazvo zvakataura nezvezvirongwa zvekambani: «Kuve neLinux chiteshi zvinogoneka uye zvinogona kuitika sechinangwa chakatambanudzwa«. Kunyangwe iyi nzira yekukurudzira nharaunda isiri iyo yakanyanya kunaka. Mutambo uyu uri kuvakwa pachishandiswa Visionaire Studio. Iyo inosanganisira Linux, saka chivakwa chekuzvarwa chichiri mumabasa. Asi, "inotsigira Kickstarter ichaita kuti kuburitswa kweLinux kuwedzere«. Chero zvazvingava, Casebook 1899 inoita kunge iri kuuya kuLinux kana zvese zvikafamba zvakanaka nemushandirapamwe wemari. Kana zvirizvo, nekufamba kwenguva uchakwanisa kunyura mune shangu dzemutikitivha Joseph Kreiser kuti aongorore zvinhu uye abvunze zvapupu kuti awane mupari wemhosva mune imwe nyaya iripo.
Kunyangwe zvichiita sekunge Casebook 1899 - The Leipzig Murders ichasvika muna 2023 yeLinux, zvingangoita kuti neProton ichange ichitamba zvisati zvaitika.
Kana zvakadaro hunhu kubva kuCasebook 1899 - The Leipzig Murders:
Iyo yakasarudzika dhizaini, hapana chinoshamisa magirafu.
Simba remutambo nderokunongedza kuchinhu kana munhu wobva wadzvanya kuti uongorore.
Iyo inokutendera iwe kubvunzurudza kana kubvunzurudza zvapupu uye vanofungidzirwa zvakateerana, nesarudzo dzenhaurirano dzakasiyana.
Mubhuku remutikitivha pachange pakanyorwa zvimwe zvingangoiswa kuti vaedze kugadzirisa nyaya yacho nekutsvaga mupari wemhosva.
Nemagumo akawanda enyaya yega yega, zvichienderana nesarudzo dzaunoita. Naizvozvo, pese paunotamba ichave magumo akasiyana.
Basa rakatarisa kunyanya panhaurirano nekudyidzana.
Dhawunirodha demo Casebook 1899 - Chitoro cheStam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Casebook 1899: zita rine chitarisiko chekare uye zvakawanda zvakavanzika